လုံခြုံရေး အားနည်းလာတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ထုတ် စမတ်ဖုန်းများ
11 Aug 2018 . 9:57 PM
သိကြပြီးတဲ့အတိုင်း Security ပိုင်းမှာ iPhone အသာဆုံးလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် ဈေးကြီးလွန်းနေလို့ တော်ရုံအနားမသီဖို့ မလွယ်ပါဘူး။Android ဘက် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Security ကောင်းကောင်းသုံးထားတဲ့ Google Pixel ဖုန်းတွေနဲ့ Samsung အမြင့်ဖုန်းတွေက ဈေးမြောက်လွန်းနေပြန်ရော။ နောက်ပြီး တန်ဖိုးအလိုက် စွမ်းဆောင်ရည် စကားပြောနေသေးတယ်ဆိုတော့ ကိုယ်သုံးချင်တာနဲ့ အံ့ကိုက်ဖြစ်ရဲ့လား စဉ်းစားရသေး၊ ဒီလို ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတုန်း စမတ်ဖုန်းတွေမှာ လုံခြုံရေး အားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ အတော် အလေးနက်ထား စဉ်းစားရမလို ဖြစ်နေပါပြီ။
အဲ့ဒီလို တန်ဖိုးထက် Performance ပိုင်း ရွေးချယ်လိုက်ကြတဲ့အခါမှာ ဈေးနှုန်းလဲသင့်၊ ကင်မရာလည်းကောင်း၊ ဂိမ်းကစားရတာလည်း ဖလန်းဖလန်းဖြစ်စေမယ့် Budget to Mid-range စမတ်ဖုန်းတွေက မျက်စိကျစရာ။ ဒီလိုအချက်တွေကြောင့် အပြစ်ပြောစရာ မရှိဘူးလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် Essential ၊ Asus နဲ့ ZTE တို့လို Brand နာမည်နဲ့ ထွက်ထားတဲ့ ဖုန်းလေးတွေက Security ပိုင်း အတော့်ကို ယိုယွင်းနေတယ်လို့ သုတေသီတွေ ပြောနေကြပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘာအားနည်းချက်ရှိနေတာလည်း၊ ဖုန်းအခိုးခံလိုက်ရလို့ ဆိုင်တဆိုင်မှာ Password ဖြည်တဲ့ Tool လေးနဲ့ ဖြေရှင်းပေးလို့ရတဲ့ အားနည်းချက်မျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာက ဟိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ Meltdown လို လုံခြုံရေးအားနည်းချက်မျိုးပါ။ ဒါကို ဥပမာပေးရရင် ဖုန်းထဲဝင် Hack ပြီး Screenshot ရိုက်မယ်၊ ကိုယ်မလုပ်ပဲ ဖုန်းထဲက Message တွေပြင်ရေးမယ် အဲ့လိုမျိုး Control လုပ်ထားလို့ရတဲ့အထိ လုံခြုံရေးအားနည်း နေတယ်လို့ ပြောချင်တာပါ။
Unlockable or Hackable?
ဒါကို Asus ဖုန်း မကောင်းဘူး၊ Essential ဖုန်း မကောင်းဘူးဆိုပြီး Brand အလိုက် တိုက်ခိုက်တယ် မထင်လိုက်ပါနဲ့၊ Wired သတင်းဌာန ပြောကြားချက်အရ အဲ့ဒီ Brand နာမည်နဲ့ ထွက်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေမှာ လုံခြုံရေး အားနည်းချက်ရှိနေတယ်လို့ ထောက်ပြထားလို့ပါ။ အဲ့ဒီထဲ LG လို ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီကပါလိုက်သေး။ အရင်တစ်လတုန်းကလည်း Twitter စာမျက်နှာမှာ ကောင်လေးတယောက်က သူ့ကောင်မလေးကိုင်တဲ့ Galaxy S9 စမတ်ဖုန်းက အလိုအလျောက် Message ထပို့နေတယ်လို့ ရေးသားခဲ့လို့ Samsung သတင်းလေးတောင် ဟိုးလေးတကျော်ကျော် ဖြစ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့်မလို့ Meltdown လို လုံခြုံရေး အားနည်းချက်ကို စမတ်ဖုန်းကုမ္ပဏီတွေရော Google က ပါ Security Patch တွေနဲ ကာကွယ်နေရပါပြီ။ နောက်ပြီး အဲ့ဒီ Meltdown ကလည်း Android OS ပေါ် အခြေခံပြီး ပေါက်ဖွားလာခဲ့တာဆိုတော့ ဘယ်သူမှ အငြိမ်မနေရပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရင် Android OS ကိုက တစ်ခြား 3rd Party Software တွေနဲ့ Code ပြင်ရေးလို့ရအောင် တမင်ခွင့်ပြုပေးထားတာဆိုတော့ တိုက်ခိုက်လို့ ပိုလွယ်၊ ပိုအစဉ်ပြေတာပေါ့နော်။
ဒါကြောင့် Asus ၊ Essential နဲ့ LG ဖုန်းတွေ လုံခြုံရေးအားနည်းနေတယ်လို့ နာမည်တပ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ လစဉ်လတိုင်း Security Patch ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ Wired သတင်းဌာနမှာ အတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ပြဿနာမျိုးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အရင်တုန်းက Security Patch မှန်မှန်မရလို့ လုံခြုံရေး အားနည်းနေတာလို့ AT&T ထောက်ပြထားတာမလို့ LG ၊ Asus နဲ့ Essential ဆိုတဲ့ Brand နာမည်ထက် အခုချိန်မှာ ဘာ Android ဖုန်းပဲ ကိုင်ထားကိုင်ထား Security Update လုပ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
လုံခွုံရေး အားနညျးလာတဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈထုတျ စမတျဖုနျးမြား
သိကွပွီးတဲ့အတိုငျး Security ပိုငျးမှာ iPhone အသာဆုံးလို့ ပွောနိုငျပမေယျ့ ဈေးကွီးလှနျးနလေို့ တျောရုံအနားမသီဖို့ မလှယျပါဘူး။Android ဘကျ ကွညျ့လိုကျမယျဆိုရငျလညျး Security ကောငျးကောငျးသုံးထားတဲ့ Google Pixel ဖုနျးတှနေဲ့ Samsung အမွငျ့ဖုနျးတှကေ ဈေးမွောကျလှနျးနပွေနျရော။ နောကျပွီး တနျဖိုးအလိုကျ စှမျးဆောငျရညျ စကားပွောနသေေးတယျဆိုတော့ ကိုယျသုံးခငျြတာနဲ့ အံ့ကိုကျဖွဈရဲ့လား စဥျးစားရသေး၊ ဒီလို ဇဝဇေဝါဖွဈနတေုနျး စမတျဖုနျးတှမှော လုံခွုံရေး အားနညျးနတေယျဆိုလို့ အတျော အလေးနကျထား စဉျးစားရမလို ဖွဈနပေါပွီ။
အဲ့ဒီလို တနျဖိုးထကျ Performance ပိုငျး ရှေးခယျြလိုကျကွတဲ့အခါမှာ ဈေးနှုနျးလဲသငျ့၊ ကငျမရာလညျးကောငျး၊ ဂိမျးကစားရတာလညျး ဖလနျးဖလနျးဖွဈစမေယျ့ Budget to Mid-range စမတျဖုနျးတှကေ မကျြစိကစြရာ။ ဒီလိုအခကျြတှကွေောငျ့ အပွဈပွောစရာ မရှိဘူးလို့ ပွောနိုငျပမေယျ့ Essential ၊ Asus နဲ့ ZTE တို့လို Brand နာမညျနဲ့ ထှကျထားတဲ့ ဖုနျးလေးတှကေ Security ပိုငျး အတေျာ့ကို ယိုယှငျးနတေယျလို့ သုတသေီတှေ ပွောနကွေပါတယျ။
ဆိုတော့ ဘာအားနညျးခကျြရှိနတောလညျး၊ ဖုနျးအခိုးခံလိုကျရလို့ ဆိုငျတဆိုငျမှာ Password ဖွညျတဲ့ Tool လေးနဲ့ ဖွရှေငျးပေးလို့ရတဲ့ အားနညျးခကျြမြိုး မဟုတျပါဘူး။ အဓိက ဖွဈနတေဲ့ ပွဿနာက ဟိုးလေးတကြျောဖွဈသှားခဲ့တဲ့ Meltdown လို လုံခွုံရေးအားနညျးခကျြမြိုးပါ။ ဒါကို ဥပမာပေးရရငျ ဖုနျးထဲဝငျ Hack ပွီး Screenshot ရိုကျမယျ၊ ကိုယျမလုပျပဲ ဖုနျးထဲက Message တှပွေငျရေးမယျ အဲ့လိုမြိုး Control လုပျထားလို့ရတဲ့အထိ လုံခွုံရေးအားနညျး နတေယျလို့ ပွောခငျြတာပါ။
ဒါကို Asus ဖုနျး မကောငျးဘူး၊ Essential ဖုနျး မကောငျးဘူးဆိုပွီး Brand အလိုကျ တိုကျခိုကျတယျ မထငျလိုကျပါနဲ့၊ Wired သတငျးဌာန ပွောကွားခကျြအရ အဲ့ဒီ Brand နာမညျနဲ့ ထှကျထားတဲ့ စမတျဖုနျးတှမှော လုံခွုံရေး အားနညျးခကျြရှိနတေယျလို့ ထောကျပွထားလို့ပါ။ အဲ့ဒီထဲ LG လို ထိပျတနျး ကုမ်ပဏီကပါလိုကျသေး။ အရငျတဈလတုနျးကလညျး Twitter စာမကျြနှာမှာ ကောငျလေးတယောကျက သူ့ကောငျမလေးကိုငျတဲ့ Galaxy S9 စမတျဖုနျးက အလိုအလြောကျ Message ထပို့နတေယျလို့ ရေးသားခဲ့လို့ Samsung သတငျးလေးတောငျ ဟိုးလေးတကြျောကြျော ဖွဈသှားခဲ့ပါသေးတယျ။
ဒါကွောငျ့မလို့ Meltdown လို လုံခွုံရေး အားနညျးခကျြကို စမတျဖုနျးကုမ်ပဏီတှရေော Google က ပါ Security Patch တှနေဲ ကာကှယျနရေပါပွီ။ နောကျပွီး အဲ့ဒီ Meltdown ကလညျး Android OS ပျေါ အခွခေံပွီး ပေါကျဖှားလာခဲ့တာဆိုတော့ ဘယျသူမှ အငွိမျမနရေပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုရငျ Android OS ကိုက တဈခွား 3rd Party Software တှနေဲ့ Code ပွငျရေးလို့ရအောငျ တမငျခှငျ့ပွုပေးထားတာဆိုတော့ တိုကျခိုကျလို့ ပိုလှယျ၊ ပိုအစဥျပွတောပေါ့နျော။
ဒါကွောငျ့ Asus ၊ Essential နဲ့ LG ဖုနျးတှေ လုံခွုံရေးအားနညျးနတေယျလို့ နာမညျတပျလိုကျရတဲ့အခါမှာတော့ လစဉျလတိုငျး Security Patch ထုတျပေးသှားမယျလို့ Wired သတငျးဌာနမှာ အတညျပွုပေးခဲ့ပါတယျ။ အခုလို ပွဿနာမြိုးနဲ့ ပတျသကျလို့လညျး အရငျတုနျးက Security Patch မှနျမှနျမရလို့ လုံခွုံရေး အားနညျးနတောလို့ AT&T ထောကျပွထားတာမလို့ LG ၊ Asus နဲ့ Essential ဆိုတဲ့ Brand နာမညျထကျ အခုခြိနျမှာ ဘာ Android ဖုနျးပဲ ကိုငျထားကိုငျထား Security Update လုပျဖို့ မမပေ့ါနဲ့လို့ တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။